Ahoana no fijerena raha miasa araka ny tokony ho izy ny Processor Intel?
Jul 13, 2018 AaronStuart No Comments
Te hahafantatra raha miasa tsara ny mpampiasa Intel anao? Te hahafantatra ve ianao raha marina ny orinasa Intel izay nividiananao tamin'ny loharanom-baovao malaza? Te hahafantatra ireo endri-piainan'ny Intel CPU ianao? Andramo ny Toolbox Diagnostic Intel ho an'ny Windows.
Ny Intel Processor Diagnostic Tool dia programa maimaim-poana novolavolain'ny Intel Corporation. Araka ny soso-kevitra, dia afaka mandinika ireo processeurs vao avy amina Intel ary tsy afaka mamandrika processeurs hafa.
Amin'ny Tool Intel Processor Diagnostic, azonao atao ny manamarina raha miasa ny ordinatera Intel an'ny PC anao. Ny rindrankajy dia mora ampiasaina ary azo ampiasaina amin'ny mpampiasa vaovao ihany koa.
Ny Intel Processor Diagnostic Tool dia mitarika karazana fitsapana toy ny Intel, marika, cache, MMXSSE, IMC, laharana voalohany, teboka mitambolimbolina, lalao, GPUStressW, CPU, faharetan'ny CPU, PCH, ary SPBC, ary mampiseho ny valin'ny fizarana tsirairay.
Ny Intel Processor Diagnostic Tool dia mitantana ny mari-pandrefesana amin'ny alàlan'ny fitsapana voatonona etsy ambony mba hijery raha mihodina ny processeur. Ny fitaovana ihany koa dia mampiseho ny hafanana farafahakeliny sy ambony indrindra voarakitra mandritra ireo fitsapana ireo.
Raha te hahafantatra ny zava-kendren'ny fitsapana tsirairay dia tsindrio ny tabilao Config ary tsindrio avy eo ny iray amin'ireo fitsapana mba hahitana ny antsipiriany.
Ny fitsapana entina CPU dia iray amin'ireo fanandramana manan-danja vita amin'ity rindrambaiko ity. Ny fitsaboana CPULoad dia mamaritra ny processeur raha toa ka afaka manohitra ny entana 100 percent ny processeur.
Ao amin'ny tabilao fanatsarana CPU, dia azonao atao ny mahita ny endri-javatra manohana anao amin'ny Intel processeur.
Miaraka amin'ny fikirakirana tsy miovaova, ny Intel Processor Diagnostic Tool dia mandrindra ny fom-panompoana iray manontolo izay mila efatra minitra. Fa raha te-handamina ny fitsapana mandritra ny fotoana lava kokoa ianao dia afaka mifidy ny "test-in" test amin'ny alàlan'ny fitaovana> Config> Presets> mandoro amin'ny test. Mariho fa ny fitsaboana "mirehitra" dia mitsapa fotsiny ny processeur anao mandritra ny fotoana maharitra kokoa ary tsy manandrana endri-javatra fanampiny.
Raha manana PC Intel processeur ianao, dia mendrika ny hanandrana ny Intel Processor Diagnostic Tool indray mba hahazoana antoka fa miasa ny ordinatera Intel.
Tsidiho ny rohy downloada atolotra any amin'ny faran'ity lahatsoratra ity mba haka ny version farany amin'ny Intel Processor Diagnostic Tool for Windows 10 / 8 / 7. Mariho fa ny installer hafa dia azo ampiasaina amin'ny 32-bit sy 64-bit Windows. Aza hadinoina ny maka ny marina.
Ahoana no Jereo ny taranaka Intel processeur mpitarika mety hahaliana anao koa.
Intel dia nanampy an'i Microsoft hamaha ny Windows 10 lehibe - eto ny fomba
Ny Microsoft dia mandefa ny Updates amin'ny Surface Book sy Surface Pro 4
Apache lalao Unix Chrome SEO hametraka Google lalao Users USB Bing Linux Windows Windows 10 Windows 8 haino aman-jery sosialy paoma Samsung CentOS finday avo lenta bilaogy raki-daza fitaovana Toetoetra Android PPA "PC Ubuntu Ubuntu (rafitra fandidiana) iPhone rindrambaiko takelaka fikirakirana Server fitaovana Nginx Apps Company SSD Samsung Galaxy GNOME Ubuntu 14.10 taona Firefox Rafitra fikirakirana Windows Phone bilaogy Unité centrale toe-tsaina HTML Support app store Linux Ubuntu Systems Malagasy Bible Command Ubuntu 16 PHP Phone famotsorana tahirin-kevitra API WordPress 04 fitaovana finday One ' web server MAMAKA ram Microsoft File ubuntu 15.04 Twitter Plugin fikarohana Apple Watch Video windows update command line OS X Plugins Time famerenana YouTube MySQL SSH rafitra endri-javatra Linux Mint Ubuntu 14.04 Facebook Debian vaovao farany Fitaovana finday loharano misokatra Cortana Microsoft Windows HTTPS Up " CentOS 7 10 fanamarinana IP adiresy fifamoivoizana HTTP 'App nbsp Screen fitaovana web browser afa-po Database PDG